Mindi mushonga unorapa une hunyanzvi hukuru | Bezzia
Mashandisiro akanyanya ekurapa peppermint
Pau Heidemeyer | | Matipi ehutano, Utano
Mindi chirimwa chine zvakawanda zvinobatsira zvinhu Zvemumuviri wemunhu, vazhinji vedu tinogona kuishandisa kwemaviri kana matatu chaiwo madhishi, ndiko kuti, kuwedzera mabatirwo matsva kumasaradhi kana kuwedzera mashizha kuzvinwiwa zvekudya.
Zvisinei, mindi inogona kusvika pamakumi maviri epfuma dzakasiyana. Icho chimwe chezvirimwa zvinonyanya kushandiswa mu gastronomy, tinotsigira ecological uye inogona kurima kurima, saka zviri nani kuitora kubva kumashiripiti nezvitoro zvine hunyanzvi muzvigadzirwa zve organic.
Izvo zvivakwa zvemindi zvinoshamisa, kubva pano tinotsigira mashandisirwo ayo mukicheni kusiyanisa nekupa kubata kutsva uye kwekunze kune edu enguva dzose madhishi, tichave tichive kubatsira muviri wedu.
1 Peppermint zvivakwa
2 Mashandisiro aungaita peppermint nemazvo
2.1 Yakananga dosi yemunhu mumwe
Pano isu tinokuudza iwe kuti ndeapi akanakisa zvivakwa anova mabhenefiti gare gare.
Iyo inorwisa mabhakitiriya: Kana isu tikapwanya mint nyowani mashizha nemvura shoma, tinogona kushandisa mhedzisiro mune rashes, acne kana hutachiona hweganda redu. Kurumwa netupukanana kunogona zvakare kurapwa neiyi mint paste. Inobatsira kupora kwemaronda uye kupora.
Bata matambudziko ekufema: Iyo menthol iri mukati pepermermint inogona kubatsira kubata hutachiona hwekufema, kudzivirira kusangana, kugumbuka kwehuro, uye kusunungura mapapu nemhino. Asthma uye bronchitis inogona kuwana mint mubatsiri anoshanda kudzivirira zviratidzo zvavo.
Anoporesa digestive system matambudziko: inodzikamisa kuzvimba, inowedzera kudya uye inodzivirira chirwere chemudumbu. Hwema hwayo hwakasimba uye hunoita kuti matenhe ematehwe amate, inomutsa kugadzirwa kwemakemikari mudumbu.
Dzivisa kutemwa nemusoro uye kuda kurutsa: kunhuhwirira kwayo kunozorodza kwemindi kunovandudza zviratidzo zvekusvotwa uye kurwadziwa. Kutsenga mashizha eminti kunoderedza dzungu iri, nekuwedzera, kana mafuta akakosha akafemerwa, zviratidzo zvemigraine kana migraine zvinoderedzwa.
Inotibatsira kurwisa mweya unonhuwirira: mazino mazhinji ezino ane ichi mint kunhuhwirira, hazvina kuitika, inobvisa halitosis uye inoderedza mabhakitiriya emuromo.
Inodzivirira kuoneka kwecataract: Iyo ine antioxidant zvivakwa, nekuda kweichi chikonzero, kushandisa iyo mint infusion kaviri pazuva kunogona kubatsira zvikuru.
Inobatsira kudzikamisa muviri: inodzikamisa kurovera pamoyo, kushushikana kana kushushikana. Yakakwana kune vanhu vanonzwa kushaya hope.
Inonatsiridza kutenderera: Inoita seanticoagulant, inovandudza kutenderera kweropa uye inobata kusagadzikana kwakasiyana kunobva mumusoro, kuzvimba kwemakumbo, varicose mutsinga, nezvimwe.
Icho chikafu cheaphrodisiac: inofungidzirwa kuwedzera libido uye chishuwo chepabonde, kukurudzira uye matauriro.
Bata rheumatism: arthritis uye cramps zvinogona kuvandudza nekuda kwepepermermint. Kugadzira poultice yemapepermint mashizha akanyoroveswa nemvura inopisa panzvimbo inorwadza kunogona kuzorodza zvikuru.
Inoderedza mamota. inokwanisa kugadzirisa kuzvimba, kurwadziwa kana kuchenesa kwemirwi, ine zvinyoronyoro uye zvinopesana nezvirwere zvinobatsira padambudziko iri.
Anobatana chirimwa mune zvevakadzi zvepabonde: Sezvo iine hutachiona hutachiona, kushandiswa kwayo kwekunze kunogona kutorwa mukana wevakadzi vane matambudziko ehutachiona hwevakadzi. Iyo inokwanisa kuregedza kuruma nekurumwa. Kuti kuderedze kusagadzikana, mabhati kana kuwacha nekukwirirwa kwechirimwa ichi kunofanirwa kuitwa.
Mashandisiro aungaita peppermint nemazvo
Peppermint pachayo haina njodzi kuhutanoHapana mhedzisiro yakawanikwa nekuda kwekunwa kwayo, zvisinei, senge mune zvese zviitiko zvinotorwa chikafu, kana chikashungurudzwa, zvinogona kukuvadza.
Kana iri peppermint yakakosha mafuta, isina kukodzera vakadzi vane nhumbu uye vanoyamwisa. Kune rimwe divi, hazvikurudzirwe vana vari pasi pemakore matanhatu ekuberekwa kana varwere vane allergies yekufema.
Kana ikadyiwa zvakawandisa inogona kukonzera kusvotwa, kukurumidza kurova kwemoyo kana kuda kudya.
Kana iri infusions, hazvikurudzirwe kuti vana vadiki vaidye, kana nevanhu vanotambura nazvo kurwadziwa kwepamoyo, Reflux, kana hernia yekuzvarwa.
Yakananga dosi yemunhu mumwe
Inokurudzirwa kune munhu mukuru asina matambudziko anozivikanwa kana zvirwere, ari pakati pegumi kusvika makumi matatu emagiramu emiti matsva pa litita yemvura inodzika. Izvo hazvikurudzirwe kutora anopfuura mazana manomwe emamirilita ekumisirwa, chakanakira kutora makapu matatu emindi infusion, asi usapfuure.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Mashandisiro akanyanya ekurapa peppermint
Massimo Dutti anopa Guta Zviratidzo
8 zvirongwa zvetsika nevana zveKisimusi